Headline Nepal | कहिले सुल्टिएला विष्णु माझीको जीवनको पहेंली
कहिले सुल्टिएला विष्णु माझीको जीवनको पहेंली
२८ भदौ, काठमाण्डौ । “जेलैमा हो जेलैमा,चरी जेलैमा, मै छोरी रुँदारुँदै बेसी मेलैमा” तीजको अवसरमा निकालिएको सवैभन्दा धेरै हेरिएको तिज गीत ।
उक्त गीत तीन साताअघि युट्युबबाट सार्वजनिक भएको थियो । एक साता नबित्दै गीतले ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थान कब्जामात्र गरेन, मानिसको मुखमुखमा झुन्डिन पनि सफल भयो । तीजलाई लक्षित गरेर बनेको गीतले हरेक ब्यक्तिको टिकटकमा छायो । जुन गीत लोक गायिका विष्णु माझीले गाएकी हुन् ।
विष्णु माझी यस्ती गायिका हुन् उनले गायक गीत हरेक नेपालीको मुखमा झुनिने गर्दछ । उनले गाएका हरेक गीत नेपालीको मन मुटुमा बस्न सफल भएपनि उनी भने दर्शक र स्रोताबाट टाढै रहन्छिन् । उनी कही पनि देखिन्नन् स्टेज होस् या सार्वजनिक कार्यक्रम । त्यसैले पनि होला उनीमाथि सवैको चासो बढी नै हुनेगर्दछ । जब जब उनको गित सार्वजनिक हुन्छ तब तब उनले गाएको गीतसँगै उनको ब्यक्तिगत जीवनको पनि चर्चा हुने गर्दछ । उनले गायको गीतको तुलनामा अन्य गीत पुग्न लामै अवधि कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
विष्णु माझी विवाह गरेपछि बाहिर सार्वजनिक नभएको कुरा बाहिर आइरहन्छ । विष्णु माझीका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारी पनि लोक सङ्गीत क्षेत्रमै जोडिएका व्यक्ति हुन् । विष्णुले कुन गीतमा काम गर्ने वा नगर्नेदेखि आर्थिक पाटो सबै सुन्दरमणिले नै हेर्ने गरेको बताइन्छ । यतिसम्म भनिन्छ कि विष्णु माझीले मोबाइल समेत बोक्दिनन् । गीतको रेकर्डिङ गर्दा समेत उनले रातको समयमा गर्छिन् । उनले गीत रेकर्ड गरिरहँदा स्टुडियोमा कसैलाई प्रवेश गर्न दिँइदैन् । रेकर्डिङ गर्ने प्राविधिकले समेत विष्णु माझीको मुख देख्दैनन् । यिनै आधारलाई मानेर होला धेरैले विष्णु माझीलाई उनकै श्रीमानले कैद गरेर राखेका छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । तरपनि यस विषयमा विष्णु माझीले कहीँ कतै बोलेकी छैनन् ।
यति मात्र हैन् विष्णु आफै सेक्रेट शैलीमा बस्न रुचाएको र राजीखुशीमै यस्तो जीवन विताइरहेको बताउनेहरुको पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा कमी रहेको छैन् । उनले प्राय उनकै श्रीमान सुन्दरमणिले लेखेको गीत गाउने गर्छिन् । पछिल्लो समय हिट भएको तिज गीत पनि उनकै श्रीमानले लेखेका हुन् । संगीत पनि उनले नै भरेका छन् ।
यहि तीजको गीत चर्चित भएसँगै फेरि विष्णु माझीलाई लिएर सांगीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ । विष्णु माझी कहाँ छिन ? के उनीसाच्चै श्रीमानको कब्जामा छिन? उनको गीत जसरी हिट भयो ,प्रश्नहरुले पनि टाउको उठाउन थाल्यो । विष्णु माझी गीत रेकर्डिङ गराउन जाँदा अनुहार छोपेको दृश्य पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो । त्यसैलाई देखाउँदै लगातार प्रश्न गर्नेहरु बढे । त्यसैको असरका कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले माझीको बारेमा चासो देखायो । विष्णु माझीको अवस्था बुझ्न आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जालाई निर्देशन दियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई माझीको अवस्था बुझेर जानकारी दिन अह्राएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले चापाकोटमा पुगेर विष्णु माझीको अवस्थाबारे जानकारी लियो। प्रहरीको सूचना अनुसार चापाकोट विष्णुको माइतीघर । तर, त्यहाँ पुग्दा प्रहरीले विष्णु माझीको पछिल्लो अवस्थाबारे केही पनि जानकारी पाउन सकेन। गायिका माझीका बाबुआमा एक वर्षअघि बितेको र त्यतिखेर पनि माझी माइतमा नआएको स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी गराए ।
उता विष्णुका श्रीमानको घर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी रमेश थापालाई पनि आयोगले सोध्यो तर उनले प्रहरीमा खोजी वा सम्पर्क गर्न कुनै निर्देशन नआएको बताए ।
यता लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बीसीले काठमाडौंमा उनी श्रीमानसँग बस्दै आएको जानकारी दिए । उनले भने, उहाँ काठमाडौंमा नै बस्नुहुन्छ । तर, कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा हुँदैन, हामीले जानकारी पाए अनुसार कोठा फेर्दै बस्ने गर्नुभएको छ भन्ने छ । त्यस्तो सम्पर्क नै नहुने भेट्दै नभेटिने भन्ने चाहिँ होइन ।
पहिले पनि यस्तो कुरा आएकाले हामीले बुझेका थियौँ। उहाँ आफैँले यस्तो जीवन रोज्नु भएको हो अध्यक्ष बिसीले भने, बाहिर हल्ला भएजस्तो उहाँको जीवन छैन। उहाँ हाँसी खुशी हुनुहुन्छ ।
यसअघि गीत रिलिज हुँदा पनि उनीबारे यस्तै कहानीहरु सार्वजनिक हुँदै आएको हो । त्यसैले उनको जीवनलाई लिएर हुने टीकाटिप्पणी पनि नियमित आकस्मिकता बनिरहेका छन् । त्यसैको आधारमा यसपाला मानवअधिकार आयोग र प्रहरीले पनि चासो दिए । तर, जसरी चासो दिए त्यसरी सुल्ट्याउन भने सकेनन् ।
लोक गायिका विष्णु माझी
कालोसूचीमा परेका ठेकदारलाई पदक
मेलम्ची खानेपानी पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आईपीओ सर्वसाधारणमा असोज ११ देखि निष्कासन हुँदै
पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीमा चरनजीत सिंह चनी
नेरुडे लघुवित्तको बोनस सेयर डिम्याट खातामा जम्मा
विश्व बैंकको थप सहयोग आवश्यक छ- अर्थमन्त्री
विश्व बैंकको थप सहयोग आवश्यक छ : अर्थमन्त्री
ʻजीवनको पानाʼ मा सँधै स्मरणमा रहने सरोज खनालको अभिनय (भिडियो)
सुनको मुल्यमा भारि गिरावट, कति पुग्यो तोलाको
गैँडाकोट दुर्घटना : मृतक तीनै जनाको पहिचान खुल्यो
बैंकले बढाए ब्याजदर :कसको कति
बालदिवस र कोरोना महामारी : बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ?
U.S. Dollar 1 117.27 117.87
European Euro 1 137.52 138.23
UK Pound Sterling 1 161.13 161.96
Swiss Franc 1 125.75 126.40
Australian Dollar 1 85.21 85.64
Canadian Dollar 1 91.85 92.32
Singapore Dollar 1 86.93 87.37
Japanese Yen 10 10.66 10.72
Saudi Arabian Riyal 1 31.27 31.43
Qatari Riyal 1 32.20 32.37
Thai Baht 1 3.52 3.53
UAE Dirham 1 31.93 32.09
Malaysian Ringgit 1 28.11 28.26
South Korean Won 100 9.92 9.97
Swedish Kroner 1 13.51 13.58
Danish Kroner 1 18.49 18.59
Hong Kong Dollar 1 15.07 15.15
Kuwaity Dinar 1 389.60 391.59
Bahrain Dinar 1 311.13 312.72
Exchange Rates as of 2021-09-21 .